Mipaka hatraiza ny baomba? | Hevitra MPANOHARIANA |
Mipaka hatraiza ny baomba?
2012-05-03 @ 22:27 in Ankapobeny
Ny toetr'andro eto Antananarivo no mangatsiaka fa ny zavatra tiana atao eto kosa no mafana dia mafana. Nanomboka tamin'ny fanapoahana baomba mandatsa-dranomaso tetsy Ambohijatovo, toa misy baomba mipoaka hatrany isan'andro. Voalaza moa fa nisy baomba tsy nipoaka teny amin'ny Jirama Ambohipo ny alahady. Toerana takona moa ny any ka tsy dia misy mahafantatra loatra. Tsy fantatra loatra hoe inona no tanjona tiana apetraka fa izay nitranga ny 2 sy ny 3 mey ho hotantaraina kely.
Ny 2 mey, nipoaka tetsy anoloan'ny IFM misy ny CCAC tetsy aloha ny baomba lazaina voalohany. Ny fipoahana no nanakoako araka ny filazan'ny olona fa tsy nisy kosa ny zavatra simba. Na ireo fiara roa teo andaniny sy ankilan'ny "baomba" aza dia tsy naninona loatra. Heverina fa karazana tsipoapoaka somary be vanja, araka ny vazivazy, no natao tamin'ity fotoana ity. Kilalao ve sa fampitandremana? Raha baomba atao tànana izany misy lanjany ihany ny havesany. Maivana anefa no natao izany hoe natao ho fanairana ilay izy... na entina ho fampitandremana ny frantsay... Folakandro tamin'ny telo ora latsaka no nanapoahana ny baomba, tsy nisy nahamarika ny olona fa ny fipoahana no nampikorapaka.
Ny 3 mey indray, mbola nisy hatrany ny fipoahana ary teo amin'ny orinasam-barotra manana ny lazany, sady vao vita haingana (nandritra ity tetezamita ity) no kinendry. Ny voamarika voalohany aloha: somary lefy laza ity tranombarotra ity nandritra ny fitondran-dRavalomanana fa karazany voasongon'ny tranombarotra Shinoa Baolai misolo tena ny Chongong eto Madagasikara. Nivadika ny rasa rehefa niongana ny fitondrana teo aloha. Niroborobo indray ity orinasan'ny Karana iray ity. Voamarika fa mbola folakandro ihany ary tanelanelan'ny tamin'ny tamin'ny roa sy tamin'ny telo no nisy ny fipoahana (tsy voafaritra mazava tsara hoe tamin'ny firy no nisy ny fipoahana). Nahasimbana ny fitaratr'ilay orinasa ary naharatrana olona iray ity fipoahana ity. Voamarika fa ora mitovitovy no nanaovana ny fipoahana tahaka ny milaza fa vondrona na olona iray ihany no manao azy. Azo heverina kosa anefa fa mana-pahaizana amin'ny fanapoahana no nanao azy satria karazany hafa ankoatra ilay voalaza tetsy ambony no napoaka: mpiteraka angovon'aratra manko no mandrafitra ilay baomba amin'ny ankapobeny. Tsy lavitra fa 100 metatra miala amin'io toerana io monja no misy ny kaonsilà jeneralin'i La Frantsa. Mbola fampitandremana ho an'ny frantsay sy izay heverina ho terataniny ihany ve?
Misy ny gazety tonga dia miampanga avy hatrany ny ankolafy Ravalomanana [sary mila jerena] ho ao ambadik'izao fanapoahana baomba izao. Ny mpanohana ny ankolafy Ravalomanana anefa mieritreritra fa fanodikodinan-doha entina handravana na hisamborana ny mpitarika ny ankolafy izao raharaha izao. Tsy vitsy koa ny mieritreritra fa fomba atao hampidirana ny miaramila frantsay eto Madagasikara izao toe-draharaha izao satria tsy atokisany loatra ny tafika malagasy. Andron'ny fahalalahan-gazety moa ilay izy fa ny tonga dia mitoroka tsotra izao fa itsy na izaroa no nanao azy dia tena fanalam-baraka sy fanosoram-potaka tsotra izao. Atao ahoana moa fa tsy maintsy tadiavina izay endrikendrehina mba hamahana ny olana any ambadika any angamba. Na izany na tsy izany, misy ny fitenenana manao hoe izay mamafy rivotra mijinja tadio. Hiverina any amin'ny mpanao azy ihany ny tahaka ireny ary melohiko tanteraka na ny fanendrikendrehana ankitsirano na ny fanapoahana ireny baomba ireny. Tsy maintsy hieritreritra ihany ve izany fa hisy baomba hafa hipoaka indray ny andro manaraka amin'ny ora voalaza etsy ambony ihany? Entina hampanginana ny fitakiana samihafa etsy sy eroa ho ramatahora hoe samborina ve izy itony? Sa endrika fanehoan-kevitra hafa somary mahery vaika kokoa? [sary ihany] Mbola mifanontany ihany isika nefa mbola vao miandoha ity ny volana mey volana mafana eo amin'ny tontolo politika malagasy...
04 mey 2012